Uganda oo qaar kamid ah ciidamadeeda kala baxeysa Soomaaliya | Aftahan News
Uganda oo qaar kamid ah ciidamadeeda kala baxeysa Soomaaliya
Muqdisho (Aftahannews)- Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa si toos ah u sheegay inuu Soomaaliya kasoo bixinayo qaar ka tirsan ciidamada dalkaas ee ka tirsan howlgalka Midowga Africa ee AMISOM.
Musaveni ayaa sheegay inay soo wajahday xaalad adag oo u baahan in laga gudbo inta lagu guda jiro howlaha sugidda amniga Doorashooyinka ka dhacaya gudaha dalkaas 14 January, sidaas darteedna ay lagama maarmaan noqotay inay soo bixiyaan qaar ka tirsan ciidamadooda ee ku sugan gudaha Soomaalya.
Wuxuu sheegay in duruufo amni ay ku qabsatay inay qaar ka tirsan ciidamadooda kala soo baxaan Soomaaliya , isagoo xusay inay ciidamadaas si gaar ah u ilaalin doonaan Amniga Guud ee Caasimadda daka Uganda ee Kambala.
Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni
“Xubnaha Mucaaradka waxay ku hanjabeen inay gubayaan kaalimaha shidaalka ee Kampala. Waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo inaanay jirin cid gubaysa Kampala, ”ayuu yidhi Museveni.
Cabsida la xidhiidha dhinaca amniga ee dalka Uganda ayaa timid wixii ka dambeeyay markii uu dhacay dhawaan iska horimaadyo maalmo socday oo u dhaxeeyay taageerayaasha mucaaradka, kadib markii Boolisku xidheen Musharax Madaxweyne ahna Muusikiistaha Caanka ah ee lagu Magacaabo Robert Kyagulanyi.
Madaxda ugu sareysa ee midowga Africa kama ayna hadlin go’aanka ay Uganda Soomaaliya uga saareyso qaar ka tirsan ciidamadeeda, sidoo kalana Dowladda Soomaaliya kama ayna hadlin.
Gudaha Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo kor u dhaafaya illaa 17 kun oo askari oo qeyb ka ah Howlgalka Midowga Africa ee AMISOM, waxayna ciidamadaas ka kala yimaadeen Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia.